11 Atalaya+ nne Ehazaya+ hụrụ na nwa ya nwoke anwụọla. O wee bilie gbuo ụmụ eze niile.+
2 Otú ọ dị, Jehoshiba+ bụ́ ada Eze Jehoram, ya bụ, nwanne Ehazaya, si n’etiti ụmụ ndị ikom eze, bụ́ ndị a chọrọ igbu, kupụta Jehoash+ nwa Ehazaya na nzuzo, kpọrọkwa ya na nwaanyị na-enye ya ara banye n’ọnụ ụlọ ndina nke dị n’ime, ha wee zoo+ ya ka Atalaya ghara ịhụ ya, e gbughịkwa ya.
3 Ya na ya wee zoo n’ụlọ Jehova ruo afọ isii, ka Atalaya nọ na-achị ala ahụ.+
4 N’afọ nke asaa, Jehoyada+ ziri ozi, e wee kpọtara ya ndị isi nke otu narị otu narị ndị nche Keria+ na ndị isi ndị ọgba ọsọ+ n’ụlọ Jehova, ya na ha wee gbaa ndụ,+ o wee mee ka ha ṅụọ iyi+ n’ụlọ Jehova, e mesịa, o gosiri ha nwa eze.
5 O wee nye ha iwu, sị: “Ihe unu ga-eme bụ: Otu ụzọ n’ụzọ atọ n’ime unu ga-abata n’ụbọchị izu ike wee chee ụlọ eze nche nke ọma;+
6 otu ụzọ n’ụzọ atọ ga-anọ n’Ọnụ Ụzọ Ámá+ Ntọala, otu ụzọ n’ụzọ atọ ga-anọkwa n’ọnụ ụzọ ámá dị n’azụ ndị ọgba ọsọ; cheenụ ụlọ+ ahụ nche nke ọma, otu ìgwè chesịa, ndị ọzọ echee.
7 E nwere ìgwè abụọ n’ime unu bụ́ ndị ga-apụcha n’ụbọchị izu ike, ha ga-echekwa ụlọ Jehova nche nke ọma n’ihi eze.
8 Unu ga-agba eze gburugburu, onye nke ọ bụla ga-eji ngwá agha ya n’aka; onye ọ bụla nke batara n’ebe ahụ unu gbara gburugburu, a ga-egbu ya. Unu na eze soro mgbe ọ na-apụ apụ na mgbe ọ na-abata abata.”
9 Ndị isi ìgwè otu narị otu narị+ ahụ wee mee ihe niile Jehoyada onye nchụàjà nyere ha n’iwu. Onye nke ọ bụla n’ime ha wee kpọrọ ndị ikom ya, bụ́ ndị na-abata n’ụbọchị izu ike,+ tinyere ndị na-apụ n’ụbọchị izu ike, wee bịakwute Jehoyada onye nchụàjà.
10 Onye nchụàjà wee nye ndị isi nke ìgwè otu narị otu narị ndị nche ahụ ube na ọta ndị dị okirikiri nke Eze Devid, bụ́ ndị dị n’ụlọ Jehova.+
11 Ndị ọgba ọsọ+ wee guzoro, onye nke ọ bụla jikwa ngwá ọgụ ya n’aka, malite n’akụkụ aka nri ụlọ ahụ ruo n’akụkụ aka ekpe ụlọ ahụ, n’akụkụ ebe ịchụàjà+ nakwa n’akụkụ ụlọ ahụ, gbaa eze gburugburu.
12 O wee kpọpụta nwa+ eze ma kpukwasị ya okpueze,+ dokwasịkwa Ihe Àmà+ ahụ n’isi ya; ha wee mee ya eze+ ma tee ya mmanụ.+ Ha wee malite ịkụ aka,+ na-asị: “Eze, ị ga-adị ndụ!”+
13 Mgbe Atalaya nụrụ mkpọtụ nke ndị na-agba ọsọ, ọ bịakwutere ha n’ụlọ Jehova ozugbo.+
14 O wee hụ, ma, lee, eze guzo n’akụkụ ogidi+ dị ka omenala si dị, ndị isi na ndị opi+ guzokwa n’akụkụ eze, ndị ala ahụ niile nọkwa na-aṅụrị ọṅụ+ ma na-afụ opi. Atalaya+ dọwara uwe ya ozugbo wee malite iti mkpu, sị: “Izu ọjọọ! Izu ọjọọ!”+
15 Ma Jehoyada onye nchụàjà nyere ndị isi nke ìgwè otu narị otu narị, bụ́ ndị isi ndị agha, iwu,+ sị ha: “Kpọpụnụ ya n’ebe a unu gbara gburugburu, werekwanụ mma agha gbuo onye ọ bụla nke na-eso ya n’azụ!”+ N’ihi na onye nchụàjà sịrị: “Unu ekwela ka e gbuo ya n’ụlọ Jehova.”
16 Ha wee jide ya, o wee bịarute n’akụkụ ụzọ ịnyịnya si abanye+ n’ụlọ eze,+ e wee gbuo ya n’ebe ahụ.+
17 Jehoyada wee mee ka Jehova+ na eze+ na ndị Juda gbaa ndụ,+ ka ha wee bụrụ ndị Jehova; meekwa ka eze na ndị Juda gbaa ndụ.+
18 E mesịa, ndị ala ahụ niile bịara n’ụlọ Bel ma kwatuo ebe dị iche iche a na-achụrụ ya àjà;+ ha kụrisịkwara ihe oyiyi ya dị iche iche.+ Ha gbukwara Matan+ bụ́ onye nchụàjà Bel n’ihu ebe ịchụàjà ndị ahụ.+
Onye nchụàjà wee họpụta ndị nlekọta ga na-elekọta ụlọ Jehova.+
19 Ọ kpọkwaara ndị isi nke ìgwè otu narị otu narị na ndị nche Keria+ na ndị ọgba ọsọ+ na ndị ala ahụ niile, ka ha wee si n’ụlọ Jehova kpọdata eze; ha wee si n’ụzọ ọnụ ụzọ ámá+ ndị ọgba ọsọ gbadata n’ụlọ eze; o wee nọkwasị n’oche ndị eze.+
20 Ndị ala ahụ niile wee na-aṅụrị ọṅụ;+ obodo ahụ enweghịkwa nsogbu ọ bụla, ha jikwa mma agha gbuo Atalaya n’ụlọ eze.+
21 Jehoash+ gbara afọ asaa mgbe ọ malitere ịchị.+
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D12%26Chapter%3D11%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl